မြောက်ပိုင်းဒေသမှ အရိုးတွန်သံများ (အပိုင်း- ၃) | ပျူနိုင်ငံ
မိတ်ဆွေတွေကို အသိပေးစရာ နှစ်ခုရှိပါတယ်။ တကယ်တော့
ကျနော်ဟာ ဒီလို စိတ်ထိခိုက်၊ ဒဏ်ရာအနာတရဖြစ်စရာကောင်းတဲ့
အကြောင်းအရာတွေကို အင်တာနက်မှာ တင်ပြီးမရေးချင်ပါဘူး။ ၁၉၉၈ ထိုင်းနယ်စပ်ကိုရောက်လာကတည်းက ဒီကိစ္စတွေကို ရှင်းကြဖို့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောဆိုခဲ့ဘူးတယ်။ “အရေးတော်ပုံပြီး ရင် ရှင်းမှာပါ”
ဆိုတဲ့ စကားနဲ့သာ ချွေးသိပ်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ သိကြတဲ့အတိုင်းပဲ။ ပြည်ပ
မှာ ဒီလို စရိုက်တွေနဲ့သွားလို့ကတော့ အရေးတော်ပုံသက်တမ်း နောက်ထပ်
နှစ်(၅၀) ကြာလည်း ပြီးနိုင်မယ် မထင်ဘူး။ လွန်ခဲ့တဲ့ တနှစ်ကျော်လောက်က ဒေါက်တာနိုင်အောင်တယောက်၊ ကျနော့်ဆီကို လမ်းကြုံလို့အလည်ဝင်လာပါတယ်။ အဲ့ဒီတုံးကလည်း သူကတဆင့်၊ ရော်နယ်အောင်နိုင် ဆီကို စကားလက်ဆောင်ပါးလိုက်ပါတယ်။ ကာယကံရှင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ လုပ်ပါ။ ဒီကိစ္စဟာ လူတွေသက်ရှိထင်ရှားရှိနေစဉ်မှာ ရှင်းရမယ် လို့ ပြောလိုက်ပါတယ်။ အဲ့ဒီစကားတွေကို ကျနော့ဘာသာ ကြားကနေ ပွဲစားလုပ်ပြောပေးနေတာ အကြောင်းရှိပါတယ်။ သူ့ကို သဲကြီးမဲကြီးလိုက်နေတဲ့ အုပ်စုတွေရှိနေသလို၊ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ၊ ဒီကိစ္စကြီးက ရှုပ်ထွေးလာတော့မှာမို့ပါ။ ပက်ပက်စက်စက် ခံလိုက်ရသူတွေက အများကြီးပဲလေ။ ဘယ်လိုလုပ်ကြေအေးနိုင်မှာလဲ။ ပြီးတော့ ရော်နယ်အောင်နိုင်တယောက် ဘီဘီစီ မှ ဘယ်လိုအလုပ်ပြုတ်ခဲ့သလဲ ဆိုတဲ့အချက်တွေကိုလည်း ကျနော်သိနေလို့ပါ။
အပိုင်း ၄ ကို ဆက်မျှော်နေပါတယ်
စိတ်ဝင်စားစွာ ဖတ်နေပါတယ် အစ်ကိုရေ
31 December 2011 at 01:11
I am very interesting and amazing surprise of event ,wait and see your story.if real one?must to refar ICC.
I"ll be waiting to red fast from end posts
amazing post. i will copy to read all of my friends
အဲ----- နန်းအောင်ထွေးကြည် ကိုလဲသနားလိုက်တာ
3 January 2012 at 12:44
စိတ်ထဲမှာပဲ သိမ်းထားဖြစ်တဲ့ မှတ်ချက်တခု လွန်ခဲ့တဲ့ ငါးနှစ်ကျော်ကတည်းကရှိခဲ့တယ်
အဲဒါက ........... တွေ့ဖူးသမျှ လူမျိုးခြား ၉မျိုးလောက်နဲ့ယှဉ်ကြည့်ပြီး ရာခိုင်နှုန်းအရ ကိုယ့်အမျိုးကို အဆင့်တခုသတ်မှတ်မိတယ်
3 January 2012 at 16:01
မောလိုက်တာ အစ်ကိုရေ။ စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်။
4 January 2012 at 18:34